Tonlọ Ọrụ Ọrịa Cancer Proton Radiation - California Proton
H H OTOW ANYRE SI EJI NA-ACHỌ AH SA N’ INLỌ MAD SA AH P N’FLỌ N’AD AND N’ ANDLỌ NCHE A NA-AH T N’ TLỌ NCHE A
Nhọrọ Telemedicine dị ugbu a
ọchụchọ Ogwe Ndidi858.283.4771
Brain & Ogwu
Isi & Olu
Ọ bụ Nasal
Ntughari & Secondary
Ndidi Nkwado Nlekọta
Efu & mkpuchi
Ndi dibia anyi
Echi Ka Mma
Soro Ọrịa cancer
Ọ bụrụ na achọpụtala gị na oge mbụ, ma ọ bụ na-eche cancer ihu ugboro ugboro, ọgwụgwọ proton nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma gị dịka otu n'ime ọgwụgwọ ọrịa cancer kachasị mma ma dị irè n'ụwa.
Usoro proton bụ ụdị ọgwụ na-apụ apụ apụ, akwadoro maka ụdị ọrịa kansa ọtụtụ ndị nwere ọgwụgwọ dịka ọfụma, ịwa ahụ na radieshon ray. N’ebe San Diego, California Protons Cancer Therapy Center dị n’iru isi nlekọta ahụike, nyocha na ihe ọmụmụ sayensị. Site na ihe karịrị afọ 50 nke proton nwekọrọ ọnụ, ndị dibia anyị a ma ama n’ụwa na-agbaso ọgwụgwọ ndị na-alụ ọgụ ọgụ ọgụ na ngwaọrụ iji na-agwọ ma ọrịa kansa niile na-adịghị ahụkebe ma na-adịghị ahụkebe.
Ọgwụ radieshọn Ọgwụ
Apụtara ya nke ọma n'ime 2 milimita, teknụzụ nyocha nke pensụl anyị siri ike, nke a gbanyere n’ime ụlọ ọgwụ ise niile, na-ewepụta ọnụọgụ dị elu nke ọrịa kansa na-egbu egbu na-adaba n ’ụdị pụrụ iche nke ogo ahụ. Teknụzụ a ezubere iche na-ebuso tumor ahụ ụzọ dị ka laser, yana ịgha mkpụrụ ndụ na ahụ dị mma gburugburu.
Diegolọ Ọgwụ Ọrịa San Diego San Diego
N'ebe obibi nye otu n'ime ìgwè ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụgwọ oncology n'ụwa nke dị na mbara igwe ọgwụgwọ, ndị dọkịta si gburugburu ụwa ghọtara ma chọọ ndị dọkịta anyị. N’ezie, onye nduzi ụlọ ọgwụ anyị ejiriwo aka ya gwọọ ihe karịrị ọrịa cancer prostate 10,000 — karịa onye ọ bụla n’ụwa.
Mụtakwuo banyere ebe anyị na-agwọ ọrịa kansa.
Treatmentlọ Ọgwụ Ọrịa Cancer
Site na ndị dọkịta anyị na ndị ọrụ nlekọta iji kwado mmemme, anyị na-enye ọkwa kachasị nke nlekọta ahụike nkeonwe na ebe anyị na-agwọ ọrịa kansa. Ndị ọrụ anyị niile raara onwe ha nye onye ọ bụla na-alụ ọgụ megide kansa yana kwa ụbọchị anyị na-agbasi mbọ ike ịmepụta gburugburu ebe ndị ọrịa anyị, ezinụlọ ha na ndị enyi ha nabatara nke ọma site na obodo jupụtara na ndị enyi, ndị na-enyere aka na-emeso onye ọ bụla ihe dịka ha ga-eme ndị ezinụlọ ha.
Ọ bụ Proton Ọgwụ
Ọ masịrị m?
A na-eji ọgwụgwọ radieshon mee naanị, ma ọ bụ yana ịwa ahụ na kemoterapi, iji gwọọ ọtụtụ ọrịa kansa na etuto ahụ, gụnyere mana ọnweghị oke:
Isi & Olu Cancer
Ọrịa Brain & Spine
Proton Agwọ vs.
Radiation ọkọlọtọ X-Ray
Igwe ọkụ X-ray radieshon na usoro proton bụ ụdị radiotherapy “nha ihu”. Agbanyeghị, akụrụngwa nke ọ bụla dị iche iche ma na-ebute ọkwa dị iche iche kpughere na mpaghara tumor na akwara na akwara ndị gbara ya gburugburu.
Ajuju banyere mkpuchi na mkpuchi ọgwụgwọ?
Achọrọ m ịdị ogologo ndụ ma achọghị m itinye ihe ọ bụla na nkụchi obi ma ọ bụ obi mgbawa, ya mere ahọpụtara m ọgwụ proton. Mgbe m gbasoro Dr. Chang, m maara na California Protons bụ ebe m chọrọ ịnọ. Ọ nọrọ ọtụtụ oge na m nwere obi ike na ikike ya.
Onye Ọrịa Cancer Ara
Proton ọgwụ bụ 'onye na-agbanwe egwuregwu.' Ọ bụghị ụbọchị gafere na m echeghị na ọ bụụrụ anyị ihe ọma ka anyị bie dị kilomita isii site na otu n'ime ụlọ ọrụ proton kachasị mma n'ụwa. Ndị ọrụ niile dị ịtụnanya. Obi ọmịiko, mara ihe na ị na-esochi bụ ihe ịtụnanya.
Nna nke Kasey Harvey
Ọrịa Rhabdomyosarcoma Ọrịa
Enwebeghị m mmetụta na-adịghị mma na ọgwụgwọ m. Agara m ọzụzụ n'etiti ndị otu nwoke na ndị nwanyị na mpaghara ịgwọ ọrịa, na-agbaghị otu ụbọchị. Mụ na nwunye m, bụ́ JoAnn, nwere mmekọrịta chiri anya, m na-arụkwa ọrụ dị ka nna na onye ndu n'obodo.
Ọrịa Cancer Prostate
Anyị họọrọ usoro ọgwụgwọ proton maka ike ịbanye n'ime ụbụrụ ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla iji ruo akụkụ nke akpụ ahụ na-enweghị ike imetụ aka. Ma ebe ọ bụ na teknụzụ na California Protons bụ ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ na mba ahụ, anyị chere 'gịnị kpatara na ị ga-aga ebe ọ bụla?'
Nna Natalie Wright
Ọrịa Brain Tumor Pediatric
Na-alụ ọgụ Okwu
Blog banyere olile anya, ọgwụgwọ na ike imeri. GỤKWUO
Ajụjụ Ajụjụ Proton Therapy ọgwụgwọ Ajụjụ
Akwụkwọ nke Okwu
Kwadebe Nleta Gị
9730 Summers Oke Rd
San Diego, Azu 92121
© 2022 California Proton Cancer Center Ọgwụ amụma nzuzo Okwu & Ọnọdụ
Internet Video Radio omume TV Social Media Akụkọ Nkeji Onye bụbu onye ọrịa ma ọ bụ ugbu a Ezinụlọ ma ọ bụ Enyi Nzipu nke dibia Ntuziaka ụlọ ọgwụ Ntuziaka mkpuchi Ndị ọzọ Kedu ka isiri nụ maka anyị?*
Ọ bụrụ na ndị ọzọ, biko dee
Adreesị Striit Line 2 okwu mmetụta State AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingUgbo agha ndi aghaNdị agha ndị aghaUgbo agha nke ndi agha Koodu mpaghara
HematologyMedical OncologyOncology PediatricỌkpụkpụ OnyonyoỌrịa Na-arụ ỌrịaOncology NọọsụphysicsNtughariNdị ọzọ
Kedụ ka ị si nụ maka ọrụ a?
Akwukwo akwukwo / Akwukwo ozi na Mail
Akwụkwọ edemede / akwụkwọ ịkpọ onwe onye
Onye isi / onye nlere anya